Lufthansa Haisisiri Kugamuchira 'Vanababa naanamai'
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Lufthansa Haisisiri Kugamuchira 'Vanababa naanamai'
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • Germany Kuputsa Nhau • LGBTQ • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Lufthansa haichagashiri 'madzimai nevarume'
Lufthansa ichatora kwaziso yechinyakare "madzimai nemadzishe" kukwazisa kune vanofamba vachitsigira imwe nzira yevanhurume nevanhukadzi - sevashanyi vanodiwa, 'kana' mangwanani / manheru. '
Vatakuri veLufthansa vachapihwa yechitatu sarudzo yechikadzi panguva yekubhuka.
Lufthansa ndiyo yazvino huru inotakura mweya kuzivisa 'shanduko' yakadaro, kujoina Air Canada neJapan Airlines.
Mutauriri weLufthansa akati kutaurirana kwese kwemukati nevashandi kwaizoitwa "kuenzana kwevakadzi" zvakare.
Vatakuri vendege vari kukwira a Lufthansa kutiza munguva pfupi iri kutevera hakuchazonzwizve "Meine Damen und Herren" kana "madzimai nevarume," mutauriri wendege akazivisa nhasi.
Lufthansa ndiyo yazvino huru inotakura mweya kuzivisa 'shanduko' yakadaro, kujoina Air Canada uye Japan Airlines.
Pamusoro pezvo, vafambi veLufthansa vachapihwa sarudzo yechitatu yechikadzi panguva yekubhuka, padivi pe "murume" uye "mukadzi."
Shanduko ichaendeswa zvishoma nezvishoma paLufthansa nendege, pamwe nendege neSwitzerland, Austrian, Brussels neEurowings, zvinova zviri chikamu cheLufthansa.
Lfthansa Group yakati shanduko iyi mhinduro kune "nhaurirano iri kubatwa zvakanaka munharaunda" pamusoro pechikadzi, uye yakabva mukuda "kukoshesa vashanyi vese vari muchikepe."
Kunyangwe zvakaziviswa nhasi, shanduko yanga iri mumabasa kweinenge mwedzi. Mutauriri weLufthansa akati muna Chikumi kuti kutaurirana kwese kwemukati nevashandi kuchaitwa "kuenzana kwevakadzi" zvakare.
Air Canada ndiyo yekutanga ndege yekusiya tsika dzechinyakare nekuda kwekunzwa kwemazuva ano payakatsiva "madzimai nevarume" ne "munhu wese" kumashure mu2019. Kufanana neLufthansa, yakaunzawo sarudzo yechitatu yechisikana panzvimbo yayo yekubhuka.
Japan Airlines yakatevera muna 2020, asi yakangoshandisa shanduko kuzviziviso zvemutauro weChirungu. Haisi chete nzanga yeJapan isingatambire kuWestern-style wokeness (kuroorwa kwevanhukadzi bonde, semuenzaniso, hazvisi pamutemo ikoko), kukwazisa kunowanzo shandiswa mutauro wechiJapan kwatova kusarerekera.